PEACEFUL PA: August 2010
Rapture ခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်မှုများရဲ့ အမှား
" ထိုအချိန်နာရီကိုကား အဘယ်သူမှမသိ။ ကောင်းကင်တမန်မသိ။ ငါ့ခမည်းတော်တပါးတည်းသာ သိတော်မူ၏။ " မဿဲ ၂၄း၃၆
၁။ မသိနိုင်ပါဘူးလို့ ပြောထားရဲ့သားနဲ့ ရက်အတိအကျ ပြောနေရင် အတော်မှားနေပါပြီ။ Family Radio မှ Harold Camping က May 21, 2011 မှာ သခင်ဘုရား ကြွလာမယ်။ October 21, 2011 မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်နေပါတယ်။ အယုံလွယ်သူတွေအတွက်တော့ ပြောစရာကြီးကို ဖြစ်လို့ပေါ့။ ၁၉၉၄ စက်တင်ဘာ ၆ တုန်းကလည်း သူ ၂ နှစ်လောက် ပြောထားတာကို ယုံတဲ့သူတွေက အတူစုဝေး စောင့်နေခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကလေးတွေပါမကျန် တနင်္ဂနွေနေ့ အဝတ်အစားတွေနဲ့ ကျမ်းစာအုပ်ကိုင်ပြီး ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့် စောင့်စား နေခဲ့ကြတာပါ။ ပြီးမှ ဆရာသမားက အတွက်မှားသွားတယ်လုိ့ လျှောချလိုက်တာပါ။
၂။ မသိနိုင်အောင် လျှို့ဝှက်ထားပါတယ်ဆိုရင် နိမိတ်တွေ ပြပါ့မလား။ နိမိတ်တွေက ချီဆောင်ခြင်းအပြီး၊ မြေကြီးပေါ်အထိ ကြွလာခါနီးမှ ပြမှာပါ။ သဘာဝဘေးဒဏ်တွေ၊ စစ်ပွဲတွေ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းတွေ၊ အနာရောဂါတွေကတော့ ကမ္ဘာဦးကတည်းက ရှိနေတာပါ။ ဒီဒုက္ခခံစားရသူတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဖို့ဟာ ခရစ်ယာန်တွေ လုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေပဲ။ Signs နိမိတ်လက္ခဏာတွေကို မရှာပါနဲ့၊ Savior ကယ်တင်ရှင်ကိုသာ ရှာပါ။ Do not look for signs but the Savior.
၃။ ခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ သွေးရူးသွေးတန်း လျှောက်လုပ်နေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်သူဟာ လောကရဲ့ ဆားဆိုတော့ ဆားရဲ့သဘာဝ အငံဓါတ်ကို ထိန်းရပါမယ်။ နှိမ့်ချမှု၊ ဖြူစင်ရိုးသားမှု၊ ဆာငတ်မှု၊ ရန်ငြိမ်းစေတတ်မှု - - - စတာတွေကို ဆက်ထိန်းရပါမယ်။ လောကရဲ့ အလင်းအနေနဲ့ Brighten the corner where you are ဆိုတဲ့ သီချင်းကလေးလိုပဲ ကိုယ်ရှိရာအရပ်မှာ အလင်း လင်းရပါမယ်။
၄။ ခရစ်တော် ကြွလာမှာကတော့ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် ရက်အတိအကျပြောတာမျိုးကို ယုံလွယ်တာကတော့ ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသူ၊ ကျမ်းစာ သိပ်မလေ့လာသူ၊ ဘုရားသခင်အတွက် ဘာမှမလုပ်ပဲနေလေ့ရှိသူတွေမှာ အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်တတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ထ ယောင်နေတာမျိုးပေါ့။
၅။ ထ ယောင်တဲ့လူထက်ပိုဆိုးတာက ဟန်ဆောင်တဲ့သူပဲ။ တချို့က ခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်လို့ ပြောနေရရင် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဝိညာဉ်သဘောရှိနေပြီလို့ ကြေနပ်နေတတ်တယ်။ ပါးစပ်ကပြောတာနဲ့ ဝိညာဉ်သဘောရှိတာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ထားပြင်မှ ရှိတာပါ။
၆။ ခရစ်တော်ကြွလာမယ်ဆိုတာဟာ ယုံကြည်သူအတွက် ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။ ပျော်စရာပါ။ အခုလုပ်ဆောင်ထားတာလေးတွေအတွက် ဆုပေးဖို့ မိုးကောင်းကင်ထက်ကို ချီဆောင်မှာပါ။ စစ်မှန်စွာလုပ်ဆောင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ဒါဆိုပြီးပြီပေါ့။ ပျော်စရာ ဇာတ်သိမ်းခန်းကလေး Happy Ending မှာ ပါဝင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခရစ်ကြွလာခြင်းကို အထိတ်တလန့် မဖြစ်ပဲ ကြည်နူးစွာသာ မြော်လင့်စောင့်စားကြပါစို့။ ။
Posted by Papa at 3:16 PM
QUOTATIONS ( AUGUST ) အဆိုအမိန့်များ
1. The future of the race marches forward on the feet of little children. – Phillips Brooks.2. If
လူမျိုးတမျိုးရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ကလေးတွေ ခြေထောက်လှည့်တဲ့ဖက်ကို ဦးတည်နေပါတယ်။
2. If the world is ever to get on its feet again,
the church will get on its knee again.
လောကီသားတွေဟာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်ရစမြဲ ဆိုရင်
အသင်းတော်က ကိုယ်ဒူးပေါ် ကိုယ်ရပ်ရပါမယ်။
3. I don't know who my grandfather was;
ကျွန်တော့အဘိုး ဘယ်သူဆိုတာ ကျွန်တော် မသိဘူး။
သူ့မြေး ဘာဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာပဲ သိချင်နေတယ်။
4. No one can believe how powerful prayer is,
And what is able to effect,
But those who have learned it by experience. – Martin Luther.
ဆုတောင်းတာဟာ သိပ်တန်ခိုးပါတယ်၊ သိပ်ထိရောက်တယ် ဆိုတာကို
လက်တွေ့ သင်ယူထားသူမှတပါး တခြားလူ မသိနိုင် နားမလည်နိုင်ပါ။
5. To know the will of God is the greatest knowledge.
ဘုရားအလိုတော် သိရတာဟာ အကြီးမြတ်ဆုံး အသိပညာပါ။
အလိုတော်ကို ဆောင်ရွက်တာကတော့ အကြီးမားဆုံး အောင်မြင်မှုပါ။
Because it is all the time receiving but never giving out.
Because they are all the time receiving but never giving out.
ပင်လယ်သေ ဘာကြောင့် သေရသလဲ။
အချိန်ပြည့် အယူပဲရှိပြီး အပေးမရှိလို့ပါ။
ခရစ်ယာန် အများစု ဘာကြောင့် အေးစက်နေသလဲ။
You may never do everything you dream you'll do,
but you'll never do any more than you dream.
So dream and dream big.
It costs no more to shoot at eagles than it does at skunks.
လုပ်မယ့် စိတ်ကူးအကုန်လုံး မလုပ်မိတတ်ပေမယ့်
စိတ်ကူးထားတာထက်တော့ ပိုလုပ်မိမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒါကြောင့် စိတ်ကူးပါ။ ကြီးကြီးမားမား စိတ်ကူးပါ။
အနံ့ဆိုးတဲ့ ဖျံကြားတွေကို ပစ်ရတာထက်
သိန်းငှက်တွေ ပစ်ရတာက ဘာမှပိုမကုန်ကျပါ။
I will not permit any man to narrow and
degrade my soul by making me hate him.
သူ့ကို မုန်းလို့ ကျွန်တော့ ဝိညာဉ် အမြင်ကျဉ်းမြောင်းလာ၊
အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျတာမျိုး ဘယ်သူ့ကြောင့်မှ
What your conscience says is more important
than what your neighbors say.
သူများပြောတာထက် ကိုယ့် အသိစိတ် ပြောနေတာတွေက
Difficulties can affordaplatform upon
which the LORD can display His power.
Prayer gives you courage
to make the decisions you must make inacrisis
and then the confidence to leave the result to God.
ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲတဲ့ သတ္တိကိုပေးတယ်။ ပြီးတော့
အရှုံးအမြတ်ကို ဘုရားလက်ထဲ ပုံအပ်ရဲစေတယ်။
I never prayed earnestly for anything
but it came sooner or later,
and oftentimes in the way I least imagine.
အသည်းအသန် တခါမှ ဆုမတောင်းဖူးဘူး။
ဒါပေမယ့် အနှေးနဲ့ အမြန် ဆိုသလို ရလာတတ်တယ်။
မထင်မှတ်ပုံနဲ့ ဖြစ်လာတတ်တာ များတယ်။
စိတ်မပါဘဲ စကားသက်သက် ဆုတောင်းမယ့် အစား
စကားမပါဘဲ စိတ်နဲ့ပဲ ဆုတောင်းပါ။
ဆုတောင်းတာက လူကို အပြစ်မလုပ်စေဘူး။
အပြစ်ကလည်း လူကို ဆုမတောင်းစေတော့ဘူး။
To have an unforgiving spirit and harbor bitterness only hurt one's self.
Hatred isapoison that destroys the vessel in which it's kept.
- Dr. Curtis Hutson
ခွင့်မလွှတ်ပဲ ခါးသည်းတဲ့ စိတ်တွေမွေးတာဟာ ကိုယ့်ကိုပဲ ပြန်ထိခိုက်တယ်။
အမုန်းဆိုတာ ထည့်ထားတဲ့ အိုးကို ဖျက်ဆီးတဲ့ အဆိပ်တမျိုးပဲ။
A man who has strong convictions
but who is weak on courage is
only slightly ahead of the man who has no conviction at all.
အမှန်ကို သိရဲ့သားနဲ့ မလုပ်ရဲသူဟာ
အမှန်ကို လုံးဝ မသိဖို့ ဦးတည်လာနေပြီ။
Unlessaman cultivatesahabit of systematic giving
when he has not much to give,
he will give little when he is rich.
မရှိတဲ့ အချိန်မှာ စနစ်တကျ မပေးတတ်ရင်
သူ ချမ်းသာလည်း နဲနဲပဲ ပေးမှာပါ။
It takes sixty four facial muscles to makeafrown
but only thirteen to makeasmile.
Why work overtome?
မျက်မှောင်ကြုတ်ဖို့ရာ မျက်နှာပြင်က ကြွက်သား ၆၄ ခု အလုပ် လုပ်ရတယ်။
ပြုံးရင်တော့ ၁၃ ခုပဲ လိုတယ်။ အပို မလုပ်နဲ့။
လူကို မရွှင်ပျစေတဲ့ ဘာသာတရားဟာ
လောကကြီးရဲ့ ဝေဒနာတွေကို မပျောက်စေနိုင်ဘူး။
Evan you're on the right track,
လမ်းမှန်ပေါ်မှာရှိ်နေပေမယ့် ရပ်နေရုံပဲ ရပ်နေရင်တော့
I have oft regretted my speech – never my silence. – Publius Syrus
တိတ်တိတ်နေလို့ မမှားဘူး။ စကားကြောင့်သာ နောင်တ ခဏခဏ ရရတာ။
There areahundred men hacking at the branches of evil
to everyone who is striking at the roots of evil.
မကောင်းတဲ့ အမြစ်ကို တိုက်ခိုက်သူ တယောက်ရှိရင်
မကောင်းတဲ့ အကိုင်းအခက်တွေကို ခုတ်ဖြတ်သူ တရာရှိပါတယ်။
တိုင်းပြည်တခုရဲ့ အင်အားဟာ အဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့
ဘာသာတရား အသိစိတ်ဓါတ်အင်အားပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
The Bible is the best book that ever was
or ever will be in the world. - Charles Dickens
သမ္မာကျမ်းစာဟာ ရှိဖူးသမျှ (သို့) နောင် ရှိလာမည့် စာအုပ်တွေထဲမှာ
Just as one digit is valuable in the multiplication table,
and one letter in the alphabet,
far more valuable is just one soul in God's sight. – R. G. Lee
ဂဏန်းတလုံးက အမြှောက်အလီ ဇယားမှာ၊
စာလုံးတလုံးက သင်ပုန်းကြီးမှာ တန်ဖိုးရှိတာထက်
ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ လူတယောက်ရဲ့ ဝိညာဉ်က ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။
Those who give up essential liberty to purchasealittle temporary safety
ခဏတာ ဘေးလွတ်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်မှုကို အရှုံးခံသူဟာ
မလွတ်လပ်ထိုက်သလို လုံလည်း မလုံခြုံထိုက်ပါ။
A smile andascowl are known and read in every language and dialect.
- Walter L. Eberly
အပြုံနဲ့ အမဲ့ကို ဘာသာစကားတိုင်းက သိနိုင်၊ နားလည်နိုင်ပါတယ်။
Conscience can be trusted asaguide for conduct only
when it is guided byaperfect standard.
- M. E. Dodd
စုံလင်တဲ့ စိတ်ဓါတ် အဆင့်အတန်းရှိမှသာ ကိုယ့်အသိစိတ်ကို
အပြုအမူ လမ်းပြအဖြစ် အားကိုးနိုင်တာပါ။
The religion of the world says, "Do and Live".
The religion of the Bible says, "Live and Do".
- Dr. Bob Jones Sr;
လောကသားတွေရဲ့ ဘာသာတရားက "ကျင့်ပြီးမှ၊ အသက်ရှင်ပါ"၊
သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ ဘာသာတရားကတော့ "အသက်ရှင်ပြီးမှ၊ ကျင့်ပါ"။
Don't learn "the tricks of the trade" ; learn the trade.
အလုပ်မှာ လူလည်ကျနည်း မသင်ယူနဲ့၊ အလုပ်လုပ်တတ်အောင်ပဲ သင်ယူပါ။
In the Christian life, we must loose to gain;
We must give to obtain;
We must be last to be first;
We must be humble to be exalted;
We must be least to be gratest;
- E. H. Blake.
ခရစ်ယာန်ဆိုတာ အောင်မြင်ဖို့ အရှုံးခံရမယ်။
အဦး ( ပထမ ) ဖြစ်ဖို့ နောက်ဆုံးကျရမယ်။
Garments of righteousness never go out of style.
ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဝတ်လုံဟာ ဘယ်တော့မှ မရိုး၊ ဘယ်တော့မှ ခေတ်နောက်မကျပါ။
Posted by Papa at 1:31 PM
Curtis Hutson ( 8 ), Integrity in Advertising --- ရိုးသားစွာ ကြော်ညာပါ
Integrity in Advertising and Promoting ( 8 )
ကြော်ငြာရာ၊ ဆွဲဆောင်ရာမှာ ရိုးသားပါ
ပိုပြောမိလို့ စိတ်ပျက်သွားကြမယ့်အစား၊ လျော့ပြောတယ်လို့ အထင်ခံရတာကမှ ပိုကောင်းပါသေးတယ်။ ရှောလမုန်မင်းထံ ရှေဘမိဖုရား လာတဲ့အခါ ပြောတဲ့စကားကို သတိရပါ။ "ယခုမူကား၊ အရင် ကြားသောစကားသည် တဝက်ကိုမျှ မမှီ။ "(၃ရာ ၁၀း ၇) သူ မြော်လင့်တာထက် ပိုတွေ့ရလို့ပါ။
တအား မြော်လင့်ခိုင်းပြီး၊ မြော်လင့်တဲ့အတိုင်း လုပ်မပြနိုင်တာထက်စာရင်၊ တရားမဟောခင် မြော်လင့်ချက်တွေ လျှော့ချပေးတာက ပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မြော်လင့်ထားတာထက် ပိုလုပ်နိုင်ရင် အောင်မြင်တာပဲ။ မိတ်ဆွေ တယောက်နဲ့ ဂေါက်သီးကစားရင်၊ ကိုယ့်ကို တော်တယ်ထင်ပြီး အမှတ်တွေ ညံ့အောင် မလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ သိပ်မတော်ဘူး။ အမှတ်တွေ ကောင်းလာတယ်လို့ပဲ ထင်ပါစေ။
ပိုပိုကဲကဲ ပြောလိုက်တဲ့အခါ တဖက်သား မြော်လင့်တဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားရတာက ဝန်ပိုလာစေပါတယ်။
ဂျော်ဂျီယာ ပြည်နယ်ရဲ့ အကြီးဆုံးအသင်းတော်မှာ သင်းအုပ်လုပ်ရတုန်းက လူတွေလာတဲ့အခါ သူတို့ ထင်ထားတာထက် ပိုတွေ့ရအောင် ကြော်ငြာဖို့ ကြိုးစားရပါတယ်။ အဲဒီနည်းဟာ ကဲ့ရဲ့စကားတွေအစား အကောင်းမြင်စကားတွေပဲ ပြောလာစေပါတယ်။ " ငါက တကယ့်အသင်းတော်ကြီးလို့ ထင်ခဲ့တာ။ လူတွေလည်း အများကြီးလို့ ထင်ခဲ့တာ။ ငါထင်သလို မဟုတ်ပါလား။ " လို့ မပြောကြတော့ဘူး။ ဂတိပေးထားတာထက် ပိုလုပ်ပြပါ။
ပိုပြောရင်တော့ ဆိုးကျိုးတွေပဲ ရလာတတ်ပါတယ်။ ။
Posted by Papa at 1:02 PM
Labels: Dr. Curtis Hutson, ဆောင်းပါးတို
Curtis Hutson ကားတစ် ဟတ်ဆန်
1934 - 1995 ၁၉၃၄ - ၁၉၉၅
လူအများက သခင်ယေရှု အသေခံဖို့ လိုတယ်၊ ဒါပေမယ့် မလုံလောက်ဘူးလို့ သွန်သင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကယ်နိုင်အောင် ကူညီဖို့ သခင်ယေရှု ကြွလာရတာမဟုတ်ဘူး။ အပြစ်သားတွေကို ကယ်ဖို့ လာရတာပါ။ စရံပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ " ငါတော့ ပေးပြီးပြီဟေ့၊ မင်း ဆက်ပေးပေတော့" လို့ မပြောဘူး။ အကြေဆပ်ခဲ့တာပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကယ်တင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို မြင်အောင်ပြဖို့ ကြွလာခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ကယ်အောင်လာခဲ့တာ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကယ်ဖို့ မကြိုးစားနဲ့၊ လက်လွှတ်ထားလိုက်၊ မထိနဲ့။ ပေးတဲ့အတိုင်း လက်ခံလိုက်။ တန်ခိုးကြီးတဲ့ ဘုရားသခင်က လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးနေတယ်။ ယူထားလိုက်ပါ။"
၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာ စာပို့ ဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ အသင်းတော် သေးသေးကလေးမှာ သင်းအုပ်ဆရာလုပ်ရင်း Sword of the Lord Conference ကိုတက်ရောကပြီး၊ စိတ်ထက်သန်လာပါတယ်။ အလုပ်ထွက်ပြီး ဝိညာဉ်ကယ်တင်ရေးတွေ လုက်ဆောင်ဖို့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Forrest Hills Baptist Church of Decatur, Georgia ဟာ အသင်းသား ၄၀ ကနေ ၇,၉၀၀ အထိဖြစ်လာပါတယ်။ ၁၉၇၂ မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ရဲ့ Sunday school အမြန်ဆုံး တိုးပွါးနေတဲ့ အသင်းတော်အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုခံရပါတယ်။ အဲဒီမှာ သင်းအုပ်အဖြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ၄ နှစ်တာမှာတော့ Georgia ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး Sunday school ဖြစ်လာပါတယ်။
သင်းအုပအဖြစ်နဲ့ ၂၁ နှစ် အကြာမှာ Dr. Hutson ဆိုတဲ့ တကယ် သက်သေခံတဲ့ the great soul winner ဟာ တတိုင်းပြည်လုံးအတွက် လုပ်ဆောင်ချင်လာတဲ့အခါ ဧဝံဂေလိလုက်ငန်းမှာ အချိန်ပြည့် ပါဝင်လာပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ရဲ့ အသင်းတော်ကြီးတချို့မှာ မြို့တွင်း၊ ဒေသတွင်း နိုးထမှုဖြစ်အောင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝတ်ပြုစည်းဝေးတခုထဲမှာ လူ ၆၂၅ ယောက် ခရစ်တော်ကို အားကိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ဂ ရက်ကြာ စည်းဝေးတခုမှာတော့ ၁,၅၀၂ ယောက် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချကြပါတယ်။
Dr. John R. Rice က တောင်းဆိုတာကြောင့် Dr. Hutson ဟာ ၁၉၇၈ မှာ THE SWORD OF THE LORD မဂ္ဂဇင်းရဲ့ တွဲဖက် အယ်ဒီတာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ၁၉၈၀ ခု Dr. Rice သေချိန်အထိ အားထုတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Dr. Rice သေချိန်မှာ Dr. Hutson ဟာ the Sword of the Lord Foundation ရဲ့ ဥက္ကဌ Sword of the Lord Conferences ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဖြစ်လာပါတယ်။. Dr. Hutson ဟာ the Sword ministries ရဲ့ ဦးဆောင်သူအဖြစ်နဲ့ပဲ ၁၉၉၅၊ မတ်လမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ တရားဟောဆရာတွေ၊ အသင်းသားတွေ ထောင်ချိပြီး ပြောင်းလဲကြသလို၊ ခရစ်တော်ထံ ထောင်ပေါင်းများစွာ ရရှိ ပြောင်းလဲကြပါတယ်။
အယ်ဒီတာအနေနဲ့ Dr. Hutson ဟာ အပေးအယူ မလုပ်တဲ့လမ်းကို ရဲရဲကြီး လျှောက်ခဲ့သူပါ။ liberals and modernists လစ်ဘရယ်နဲ့ မော်ဒန်းနစ်တွေကို ဆန့်ကျင်ပြီး fundamentalists ဖန်ဒါမင်တာလစ် ( မူရင်းတရားမြတ်နိုးသူ)တွေအတွက် ထိရောက်အောင် အမှားကင်းကင်းနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။
ဖန်ဒါမင်တာလစ် တယောက်အနေနဲ့ သမ္မာကျမ်းစာကို မူရင်းမှာ မှုတ်သွင်းရေးသားထားခြင်း၊အပျိုကညာမှ ဖွါးမြင်ခြင်းနဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ ဘုရားဇာတိ၊ အပြစ်အတွက် ကိုယ်စားအသေခံပေးခြင်း၊ ခန္ဓာနဲ့ တကွ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရခြင်း၊ ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တကွ ကြွလာခြင်း စတဲ့ အဓိက ယုံကြည်ခြင်းတရားတွေကို ကိုင်စွဲခဲ့ပါတယ်။ သီးခြားရပ်တည်ခြင်းကို ဒေသနာရော၊ လူကိုယ်တိုင်ပါ ကျင့်သုံးပါတယ်။
Sword Conference ရဲ့ ဒါရိုက်တာအဖြစ်နဲ့လည်း အောင်မြင်တဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ အများအပြားကို Sword Conference ရဲ့ အကျိုးဆက်အဖြစ် မြင်တွေ့ကြရပါတယ်။
Dr. Hutson မှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ တရားဟောဟန် ရှိပါတယ်။ ပုံဥပမာပေးတော်ပြီး၊ ဟာသညဏ်ကောင်းပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဟောကောင်းတာကြောင့် ဧဝံဂေလိဆရာအဖြစ်၊ စည်းဝေကြီး တရားဟောဆရာအဖြစ် အတော်ဖိတ်ကြားခံရပါတယ်။အပြစ်သားတွေကို ဆွဲဆောင်ရာမှာ တော်ပြီး၊ ပိုက်ဆွဲကျွမ်းတဲ့ ဆရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စည်းဝေတိုင်းမှာ လူ ဆယ်ဂဏန်းနဲ့ချီပြီး ခရစ်တော်ထံ ချဉ်းကပ်ကြပါတယ်။ သူ့တရားက ခရစ်ယာန်တွေကို ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြောဖို့ နိုးဆော်ပါတယ်။ သူသေခါနီးအထိ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို အားနည်းလွန်းလို့ မထိုင်နိုင၊ စကားမပြောနိုင်ချိန်မှာပင် လေသံလေးနဲ့ တိုးတိုးလေး ကြိုးစားပြောခဲ့သူပါ။
Dr. Hutson ဟာ စာအုပ်ကောင်း၊ စာအုပ်ကလေး အတော်များများကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပုံနှိပ်ရသလို၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတွေနဲ့လည်း ဘာသာပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
Dr. Hutson မှာ ဇနီး Gerri နဲ့ သားသမီး ၄ ယောက်ကျန်ရစ်ပါတယ်။ သမီး ၃ ယောက်၊ သားတယောက်၊ မြေးက ၁၄ ယောက်ပါ။ သမီး ၃ ယောက်လုံးက တရားဟောဆရာတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျကြပါတယ်။ သားကတော့ the Middle Tennessee Baptist Church in Murfreesboro, Tennessee ရဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ Dr. Tony Hutson ပါ။ ။
Labels: Biography, Dr. Curtis Hutson, အထုပ္ပတ္တိ
Hyles, 6, DANIEL'S SPIRIT
" ဒံယေလသည် - - - - ထူးဆန်းသော ဥာဏ်နှင့်ပြည့်စုံ၍ မြို့ဝန်တကာ၊ ဝန်ကြီးတကာတို့ထက် လွန်ကဲသောကြောင့် နိုင်ငံတော် တနိုင်ငံလုံးကို သူ၌အပ်နှင်းမည်ဟု ရှင်ဘုရင်သည် အကြံရှိတော်မူ၏။ " (ဒံယေလ ၆း၃ )
ဒံယေလအတွက် ကိုယ်ခန္ဓာ physical ထက် ဝိညာဉ်ရေး spiritual က ပို အရေးကြီးပါတယ်။ မမြင်ရတာတွေက မြင်ရတာတွေထက် အရေးကြီးပါတယ်။
သခင်ယေရှုက နောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ လူတွေဟာ ရောင်းဝယ်၊ သောက်စား၊ အိမ်ထောင်ပြုတာတွေလုပ်နေမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ရောင်းတာ၊ ဝယ်တာ၊ စားတာ၊ သောက်တာ၊ အိမ်ထောင်ပြုတာတွေဟာ အပြစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေကို အဓိက မထားဖို့ပဲလိုပါတယ်။
ဒံယေလက ဝိညာဉ်ရေးကို ဦးစားပေးတယ်။ အစားအသောက်က ဒုတိယပါ။ ဒါဟာ အိပ်မက်အနက်ဖွင့်တာကို သူတပါးမလုပ်နိုင်ပဲ ဒံယေလလုပ်နိုင်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအချက်ပဲ။ ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ မျက်မြင်ရအရာတွေကို အချိန်အများကြီးပေးပြီး၊ မျက်မြင်မရ အရာတွေအတွက် အချိန်နဲနဲပဲပေးတာ ဝမ်းနည်းစရာပါ။ ဒံယေလအတွက် ခန္ဓာက ဝိညာဉ်ကို မလွှမ်းမိုးဘူး။ ဝိညာဉ်က ခန္ဓာကို လွှမ်းမိုးထားတယ်။ အစားအသောက်စားပြီး ဘုရားသခင်ကို မပြစ်မှားဘူး။ ဘဝကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားဆင်ခြင်တာ တွေ့ရတယ်။ တာဝန်သိတယ်။ အလိုတော် သိတယ်။ ဒီအချက်တွေနဲ့ အသက်ရှင်တယ်။
ဒံယေလလို ဝိညာဉ်ရေးကို အဓိကထားကြပါစို့။ အသက်ရှင်နေရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို ရှာကြစို့။ အဓိကအချက်နဲ့ လွဲစေမယ့်အရာတွေကို ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရာ ဝိညာဉ်စိတ်အားကြီးဖို့ လိုပါတယ်။
Posted by Papa at 12:48 PM
Labels: Dr. Jack Hyles
၁၄။ ယောနသန်သေပေမယ့် ဒါဝိဒ်ရဲ့ မေတ္တာက ဆက်ရှိနေပါတယ်။ ၂ရာ ၉း ၁ မှာ ယောနသန်ရဲ့ သားတယောက်ကို ဒါဝိဒ်က ချီးမြှောက်ပါတယ်။ ခြေမသန်စွမ်းတဲ့ မေဖိဗောရှက်ကို နန်းတော်မှာ နေရာပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီထက်စောစော ကျေးဇူးပြုနိုင်သားနဲ့ လို့ တချို့က ဆိုကြပါတယ်။ မေတ္တာပြဖို့ နောက်ကျနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကို ကျေးဇူးပြုဖို့ ကြိုစဉ်းစားပြီး၊ ဖွင့်ပြောပြသင့်ပါတယ်။ အသိပေးသင့်၊ ဝေမျှသင့်ပါတယ်။ မိဘသေပြီးနောက် သားသမီးကို ကြည့်ရှုစောင်မတာ ကောင်းပါတယ်။ မသေခင်ဆို ပိုကောင်းတာပေါ့။ မိဘနဲ့ သားသမီး၊ လင်နဲ့မယား၊ မောင်နှမ စတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေထက် ယောနသန်နဲ့ ဒါဝိဒ်ရဲ့ ချစ်ခြင်းကတော့ ဘုရားသခင်ပေးတာပါ၊ ထာဝရတည်ပါတယ်။
(Chapter4from Dr. Hyle's excellent book, Blue Denim and Lace)
ဂျူးလူမျိုးတွေမှာ သန့်ရှင်းတဲ့နေ့တွေ၊ ကာလတွေ၊ ပွဲနေ့တွေ ရှိပါတယ်။ ကောလောသဲ ၂း ၁၄-၁၇ မှာတော့ ဒါတွေအားလုံး ကားတိုင်မှာ ရိုက်ထားလိုက်ပါပြီ။ " ထို့ကြောင့် စားသောက်ခြင်းအမှု၊ ပွဲနေ့၊ လဆန်းနေ့၊ ဥပုဒ်နေ့တို့ကို စောင့်ခြင်းအမှုတွင် သင်တို့ကို အဘယ်သူမျှ မစစ်ကြော မစီရင်စေနှင့်။ ထိုအရာတို့သည် နောက်ဖြစ်လတံ့သောအရာတို့၏ အရိပ်ဖြစ်ကြ၏။ "
ရှင်ပေါလုက ဂလာတိလူတွေကို ပညတ်တရား legalism သမား တွေ ဖြစ်မှာစိုးတယ်။ ခရစ်တော်၌ဆိုရင် နေ့တိုင်းဟာ ဥပုဒ်၊ နေ့တိုင်း သန့်ရှင်းတယ်လို့ ပြောရတယ်။
ဂျူးလူမျိုးတွေမှာ သန့်ရှင်းတဲ့နေရာ အရပ်တွေလည်းရှိတယ်။ အသန့်ရှင်းဆုံးအရပ်ဆိုတာလည်း ရှိတယ်။ ယာကုပ်ရေတွင်းမှာတွေ့တဲ့ အမျိုးသမီးကို ပြောရာမှာ " ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည် နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာနှင့်၎င်း ကိုးကွယ်ရမည် " ( ယော ၄း၂၃ ) အဲဒီတော့ သန့်ရှင်းရာ အရပ်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ သန့်ရှင်းတဲ့ တော်စပ်မှု sacred relationships တွေပဲ ရှိတော့တယ်။
သန့်ရှင်းရာ အရပ်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ ကိုယ် နှစ်သက်တဲ့အရပ်ပဲရှိတယ်။ သန့်ရှင်းရာ နေ့ရက်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ နေ့စွဲတွေပဲရှိတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေတာက တော်စပ်၊ ပတ်သက်မှုကြောင့်ပဲ။
၁။ နောင်မှာ ဘယ်လို ခံစားရမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ နောင်မှာ အဖိုးတန်မယ်ဆိုရင် အခုလည်း တန်ဖိုးထားပါ။ လူ့သဘာဝမှာ ဆိုးတာက သေမှ၊ လွန်မှ တန်ဖိုးထား၊ တမ်းတတတ်ကြတာပဲ။ အတူနေတုန်းမှာ တန်ဖိုးထားတတ်ပါ။
၂။ အခု အသုံးဝင်တာတွေဟာ နောင်မှာ ဘာမှ အသုံးမရ ဖြစ်တတ်တယ်။ Everything is temporary. ဘာမှ မမြဲဘူး။ အဲဒီတော့ အသုံးဝင်တာလည်း အသုံးမဝင်သလို၊ နောင် အသုံးမဝင်မယ့် အရာလည်း အခု အသုံးမဝင်လို သဘောထားဖို့ပါပဲ။ အဖြစ်အပျက်ကလေးတခုကို ပြန်တမ်းတရတာက နေရာတွေ၊ အချိန်တွေကြောင့် မဟုတ်ပဲ၊ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လူကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ တနေရာမှာ အတူနေပါ။ အတူနေတာ ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ရင်းနှီးလာမယ်။ အတူစား၊ အတူသွား၊ အတူဆုတောင်းသူတွေရှိပါတယ်။ စားနေကြ နေရာ၊ စားနေကြ အချိန်ဆို ပို စိတ်စွဲလာတတ်တယ်။ Man isacreature of habits. လူမှာ အကျင့်ပဲ။ ကောင်းတဲ့ အလေ့အထကလေးတွေကိုတော့ နောင်အမှတ်ရစရာ အဖြစ်သာမက အခုကတည်းက တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
၄။ လက်ရှိ ဆက်နွယ်မှုကို တိုင်းတာပါ။ ဆိုးတာတခုက မတိုင်းတာခင် အပျက်စောင့်တတ်ကြတာပဲ။ ကောင်းတုန်း တိုင်းတာပါ။ မှားမှ၊ လွဲမှ နှမြောဖို့ စောင့်မနေပါနဲ့။ သေခြင်းက သန့်ရှင်းစေတာ မဟုတ်ဘူး။ ရှင်ခြင်းကသာ သန့်ရှင်းစေတာပါ။ ကောင်းတာလေးတွေက သန့်ရှင်းစေတာပါ။ ကိုယ့်အလုပ်ရှင်က သဘောကောင်းရင် အခု သိပါ။ သူမရှိတော့တဲ့ အထိ စောင့်မနေနဲ့။ အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းရင်လည်း အခု သိတော့။ သေမှ သိဖို့ စောင့်မနေပါနဲ့။
၅။ ပေးသင့်တဲ့ လက်ဆောင်ကို ပေးပါ။ လက်ဆောင်ဟာ အဆောင်တမျိုး Shrine ပဲ။ ချစ်ခင်သူကို ပို သတိရစေသလို၊ ဆုတောင်းပေးဖို့လည်း သတိရစေပါတယ်။
၆။ အချိန်သတ်မှတ်ထားရင် သန့်ရှင်းတဲ့ အချိန်တွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ အချိန်မှန်မှန်ပေးတတ်သူမှာ သတိရစရာတွေဖြစ်လာမယ်။
၇။ သွားနေကြ လမ်းကြောင်းဟာ သန့်ရှင်းတဲ့နေရာ ဖြစ်လာစေတယ်။ ကျောင်းသွားနေကြလမ်း၊ အလုပ်သွားနေကြလမ်းတွေဟာ စိတ်စွဲစရာ ဖြစ်လာတတ်တယ်။
၈။ ရင်းရင်းနှီးနှီး နေပါ။ ငယ်ငယ်က စာအုပ်တအုပ် ဖတ်ဖူးတယ်။ အသေးစိတ်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီစာအုပ်ဖတ် မိတော့ ပေါင်းဖေါ် မိတ်ဆွေဖွဲ့ရမှာ မကြောက်တော့ဘူး။ စိတ်အားမငယ်တော့ဘူး။ မိတ်ဆွေတွေဟာ သီးသန့် တန်ဖိုးထားစရာ သန့်ရှင်းရာတွေ ဖြစ်လာတယ်။
သန့်ရှင်းရာ အရပ်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ သန့်ရှင်းရာ နေ့ရက်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ ပတ်သက်မှုကြောင့်သာ ဖြစ်ရတော့တယ်။ အဖိုးတန် လေးနက်တဲ့ တော်စပ်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ လက်ဆောင်တွေကလည်း အဆောင် Shrine တွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ နေရာတိုင်းဟာ သန့်ရှင်းတဲ့ ဘုရားကျောင်း၊ အချိန်တိုင်းဟာ သန့်ရှင်းတဲ့ ဥပုဒ်နေ့ ဖြစ်လာနိုင်ပြီ။
Curtis Hutson ( 8 ), Integrity in Advertising --- ...